सावधान : मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भारतीय औषधि नेपालमा छ्यापछ्याप्ती ! – ताजा समाचार
सावधान : मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भारतीय औषधि नेपालमा छ्यापछ्याप्ती !
काठमाडौं । भारत सरकारले आफ्ना जनताको सुरक्षाका लागि भन्दै प्रतिवन्ध लगाएको औषधि नेपालमा खुलेयाम बेच्ने काम भइरहेको छ । भारतमा प्रतिबन्धित पशु स्वास्थ्य एन्टिबायोटिक औषधी नेपालमा बिक्रवितरण भइरहेको छ । नेपाल सरकारले आयातमा रोक नलगाउँदा खुलमखुला भेटेनरी औषधी पसलमार्फत् यो औषधी बिक्रीवितरण भइरहेको हो ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुलाई १९९१ मा ‘कोलिस्टिन’ नामक एन्टिबायोटिकको उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोग बन्द गर्नु भन्दै सूचना निकालेको थियो । कुखुरा फार्म, माछापालन र पशु स्वास्थ्य रोग उपचारका लागि प्रयोग हुने यो औषधीले प्रत्यक्षरुपमा मानव स्वाथ्यलाई समेत असर गर्ने भन्दै भारतले राजपत्रमा अंकित गरी यो औषधि प्रतिबन्ध गरिसकेको छ । नेपालमा भारतबाटै आयात गरी यो औषधिको बिक्रीवितरण गरिने गरेको छ ।
यो पनि, डेरी उद्योगहरुले उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कटौती गरेकाले मुलुकभर मागअनुसार दूध आपूर्ति हुन सकेको छैन । दूध कम उत्पादन हुने (लिन) सिजनको मध्य समय पर्नु र भारतबाट स्कीम मिल्क पाउडर (एसएमपी) आयात बन्द हुँदा उद्योगमा दूध अभाव भएको हो । दूध आपूर्ति कम हुँदा काभ्रेको पनौतिस्थित अनमोल डेरी बन्द भएको छ भने भक्तपुरको नेभा डेरीले शनिबार बजारमा दूध नै पठाउन नसकेको जनाकएको छ ।
‘एसएमपी छैन, झोल दूध पनि स्टकमा नहुने अवस्था छ, दूध आपूर्ति समयमा हुन नसक्दा शनिबार एक पोका दूध पनि बजारमा पठाउन सकिएन,’ नोभा डेरीको उत्पादक कन्ट्री फुड प्रालिका सञ्चालक दीपक खड्काले भने । दैनिक २५ हजार लिटरको क्षमता रहेको नोभाको उद्योगबाट १० हजार लिटरमात्र नियमित उत्पादन भइरहेकोमा त्यो पनि घटेर ६ हजार पुगेको छ ।
राजधानीका आसपासमा नोभाजस्ता तीन दर्जन डेरी उद्योग छन् । मुलुकभर २०० को संख्यामा डेरी उद्योग दर्ता भइ सञ्चालनमा छन् । करिब ३० अर्ब को लगानी रहेको निजी दुग्ध उद्योगहरुको लगानी डुब्ने खतरा रहेको भन्दै उद्योगीहरुले सरकारसँग दुग्ध आपूर्ति सहज बनाइदिन माग गरेका छन् ।